ला लिगामा बार्सिलोनाको प्रभावशाली जीत, कप्तान मेस्सीले गरे दुई गोल
2075-05-03 / 2.1K 0
ला लिगाको नयाँ सिजनमा बार्सिलोनाले प्रभावशाली जित निकाल्दै सुखद सुरुआत गरेको । मेसीको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको बार्सिलोनाले एलाभेसलाई ३-० ले हरायो ।
बार्सिलोनाको जितमा मेस्सीले दुई गोल गरे । अर्को एक गोल फिलिप कोन्टिन्होले थपे ।
पहिलो हाफमा एक गोल पनि गर्न नसकेको बार्सिलोनाले तीनवटै गोल दोस्रो हाफमा गर्न सफल भयो ।
मेस्सीले ६४ औं मिनेटमा गोल गरेर सुरुआती अग्रता दिलाएका थिए । दोस्रो हाफमा मैदान छिरेका कोन्टिन्होले ८३ औं मिनेटमा गोल गरेर अग्रता दोब्बर बनाए । उन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा पुनः मेस्सीले नै अर्को गोल थपेपछि बार्सिलोना ३-० ले विजयी भयो ।
ला लिगाका अन्य खेलमा रियल सोसिडाडले भिल्लारियललाई २-१ ले हराउँदा सेल्टा डी भिगो र स्पानियोलले १-१ को बराबरी खेलेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव त छैन। नेपाल डेनमार्क जस्तो बनाउनु अहिले सपना मात्र हुन सक्छ। किनकि सपना सपना नै हो। सपनालाई विपनामा चरितार्थ गर्न ‘भिजनरी’ राजनेता...
विकेन्द्रित भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट र ठोस रणनीति सरकार र अख्तियारले बनाउनै सकेनन् । संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो ६...
नेपाल वायु सेवा निगमको विभिन्न पदहरुमा 175 भन्दा वढी संख्यामा विज्ञापन
ना.सु. जुम्ला प्रथम पत्रको लागि परिक्षा भवन तोकिएको...
ना.सु. धनकुटाको प्रथम पत्रको लागि परिक्षा भवन तोकिएको...
पद्मश्री साधना सम्मान पुरस्कार 2074 कसलाई प्रदान गरियो ?
“बैकानुर कस्मोड्रम” कुन देशको अन्तरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्र हो ?
चर्चित साहित्य "फिरफिरे" को लेखक को हुन् ?